တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာ၏ တျာချင်းများ
Posted by မေဓာဝီ at 5:12 PM
2/08/2011 5:22 PM
ကျောင်းစာအနေနဲ့သင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမယ့် စာလို့မထင်ခဲ့ပါဘူး။ တင်ပေးတဲ့ တကယ်ကို ကျေးဇူးပါ။
တကူးတက တင်ပေးတာကျေးဇူးပါ။ နောက်လည်း အားပေးဖို့ စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း....
Thank u" May"
I also love n still often recite these two Trachins(Htan thama n lel thama).I was bornalittle town on bank of Chindwin river that is famous for htanthee mot n htanyat.BTW i like SHIN NYEIN MAE's aichin too.If u also like n have them, share me pls.
2/08/2011 10:26 PM
Thank U " May"
I also like first two Trachins.My native twon is famous for Htan thee mot n Htanyat.I haven't been there almost 20 years.BTW i like SHIN NYEIN MAE's Aichin too.If u like n have them,share me pls.
ဝန်ကြီး ပဒေသရာဇာရဲ့ တျာချင်းတွေကိုတော့ ကြိုက်ပါတယ်၊ ထန်းတက်သမားဖွဲ့ကို ကျောင်းမှာ သင်ခဲ့ဖူးတယ်၊ လယ်သမားဖွဲ့ကတော့ အမေရွတ်ပြလို့ ခဏခဏ ကြားဖူးခဲ့တယ်၊
တစွန်းတစကနေ တစုတစည်းထဲ ဖြစ်သွားစေလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..။
2/09/2011 12:21 AM
ဘုန်းတော်ဘွဲ့တွေ မရေးဘဲ အောက်ခြေလူတန်းစားဘ၀ကိုသာရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီး ပဒေသရာဇာကို လေးစားကြည်ညိုမိပါတယ်။ ပထမဆုံးအပုဒ်ကို ငယ်ငယ်က သင်ဖူးလို့ တပိုင်းတစမှတ်မိနေပေမဲ့ တောင်းဆိုတဲ့ ကိုသစ်နက်ဆူးရော၊ အပင်ပန်းခံပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပေးတဲ့ မမေကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
2/09/2011 4:48 AM
၀န်ကြီးပဒေသရာဇာရဲ့ တျာချင်းတွေကို နှစ်သက်ကြလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ရှင်။ မှတ်ချက်လေးတွေ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
အညာသူ ဂျီးဒေါ်တောင်းထားတဲ့ ရှင်ညိမ်းမယ် အိုင်ချင်းတပုဒ်လဲ တွေ့ထားပါတယ်။ အဆင်ပြေရင် တင်ပေးပါမယ်နော်။
အမလေးဗျာ၊ ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာရဲ့ တျာချင်းတွေကို ကြိုက်တဲ့လူတွေ တယ်ပေါနေပါလား။ အဲဒီထဲ မင်းထက်လည်းပါတယ်ဗျို့။ မင်းထက်ပါတာက အကြောင်းရှိပါတယ်။ တောင်သမန်ရွာဖက်ရောက်တိုင်း မျိုခဲ့ဖူးတဲ့ ထန်းရေချိုမြမြလေးတွေနဲ့ မြီးစရာ ကြွက်ကောင်လုံးကြော်တွေကို သတိရမိလို့ပါဗျာ့။ ညီမလေးတစ်ယောက် လက်မညောင်းမချင်း ရှေးကဗျာတွေ အွန်လိုင်းအရောက် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါစေဗျား။
၀မ်းသာလိုက်တာ...တကယ်ပါ...၀န်ကြီးရဲ့ တျာချင်းတွေကို သဘောကျပေမယ့် နွေဦးကာလနဲ့၊ ၀သန်ကာလချီ တျာချင်းနှစ်ပုဒ်၊ လှေသမားဖွဲ့တစ်ပုဒ်ကိုပဲ ဖတ်ဖူးတာမို့ လိုက်ရှာနေမိတာ အခုမှပဲ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် လာတွေ့တော့တယ်...ကျန်တဲ့ရတုတွေကိုလည်း ဆက်တင်ပေးဖို့ အားနာနာနဲ့ request လုပ်ပါရစေ...
အင်းဝဘုရင် အင်္ဂါမင်းလက်ထက်ဆိုတာကို အင်းဝဘုရင် အင်္ဂါမောင်လက်ထက်လို့ မျက်စိမှားပြီး ဖတ်လိုက်မိတယ်။ နာမည်တူလဲ ရှိတတ်ပါ့လို့ အောက်မိလိုက်သေး။
ကိုသစ်နက်ဆူးတစ်ယောက်ထဲ ရှေးကဗျာကို ကြိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂါမောင်တို့လို ဟိုမရောက်ဒီမရောက်လူတွေလဲ ကြိုက်ပါ့။
အလုပ်လုပ်နေရင်း တနေ့ လုံးစဉ်းစားနေတာ..ဦးကြော့
ဒါပေမယ့် ဦးကြော့က ဒီလိုမျိုးရေးတာ အမှတ်မထားမိဘူး..လို့ ..တော်ကြာ ခေါင်းစဉ်တခြား ရေးသူတခြားဖြစ်နေရင် ညီမတော့ ရွာလည်နေတာ့မှာဘဲ တွေးနေတာ..။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတယောက်က မြို့ မှာမနေကြဘူး..သူ့ မိဘတွေရော မိသားစုတွေပါ..
သူတို့ ထန်းတောလေးရောက်ရင် တျာချင်းလေးကိုရွတ်ရင်းတမေ့တမောနေလိုက်တာ..။
ဆိုတာက..သူတို့ တွေထမင်းစားပြီးရင် ပန်းကန်မဆေးဘူး ..ခွေးကို ချကျွေးလိုက်တာ..
ခွေးကစားပြီး လျှာနဲ့ ရက်ထားလိုက်တာ ပြောင်စင်နေတာဘဲ...နောက်နေ့ စားရင် ထမင်းပန်းကန်ကို ရေဆေးစရာတောင် မလိုတော့ဘူး..အဆင်သင့်ထည့်စားယုံပါဘဲ..။
ကျနော်ကတော့ ရေနဲ့ ပန်းကန်ဆေးပြီးမှ စားခဲ့တာပါ..း)
ဒါပေမယ့် ကျနော့်လိုဘဲ ရှေးတျာချင်းတွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ 
လူတိုင်းဟာ ကိုယ်စီအစွမ်းနဲ့ သူနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ နေရာတခုစီတော့ ပိုင်ဆိုင်ကြတာပါဘဲဗျာ...။
2/08/2011 8:05 PM
ခုလို ရေးတင်ပေးတာလည်း အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပထမနှစ်ပုဒ်ကတော့ ငယ်ငယ်က သင်ဖူးလို့ သိတယ်..
2/08/2011 11:20 PM
2/10/2011 12:05 AM
မိဘတွေက မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကမို့ လယ်သမားဖွဲ့ စိတ်တွေ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ (သင်ခဲ့ရတယ် လို့ ထင်ပါတယ်။) တုန်းကလည်း မျက်စိထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ခဲ့ရပုံတွေကိုပါ ပြန်အမှတ်ရစေပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ မမေနဲ့ ကိုဆူးရေ
2/09/2011 7:58 AM
2/10/2011 12:07 AM
ကြိုက်တယ်။ ကြိုက်တယ်။ အားလုံးကြိုက်တယ်။ အသစ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း အဟောင်းကိုတော့ တလယ်လယ်လေ။ ပြောရရင်တော့ ဟောင်းလေ ကောင်းလေပါဘဲ။းဝ)
2/10/2011 12:08 AM
ရှေးကဗျာတွေကို ရွတ်လို့ လိုက်ဆိုကြည့်လို့တော့ တော်တော်ကောင်းတယ်နော့် အစ်မ ။
2/09/2011 4:23 PM
သမိုင်းထဲက ၀န်ကြီးတွေနဲ့ ဒီခေတ် ၀န်ကြီးတွေ
ဒါတော့ မလေး ပရင့်ထုတ်ထားလိုက်ပါပြီ။
ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့ ထမင်းဝိုင်းအကြောင်းရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးရှိရင်တင်ပေးပါလားအစ်မ။ ရေးသူကတော့ ဦးကြီးထင်တယ်။တစ်ခါပဲ ဖတ်ဖူးတာ။ ပြန်ရှာတာဘယ်လိုမှမတွေ့လို့...။
8/23/2012 4:51 AM
2/21/2015 12:51 AM